सावधान ! नयाँ लुगा लगाउँदा हुन सक्छ एलर्जी – Janamukhi.com
विभिन्न चाडपर्वमा मिठो खाने र नयाँ लुगा लगाउने नेपालीहरुको परम्परा जस्तै बनेको छ । यही नयाँ लुगाबाट शरीरमा हानिकारक विषादी समेत प्रवेश गराइरहेका हुन्छौं भन्ने हामीले सोच्दैनौं ।
कतिपय नयाँ लुगा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । अनुसन्धानले लुगा बनाउने क्रममा प्रयोग गरिएका सरायनबाट शरीरका लागि हानीकारक विषादी निस्कने र त्यसले शरीरमा विभिन्न खालका चर्मरोग निम्त्याउने गरेको पाइएको छ ।
उनीहरुले प्रारम्भिक परीक्षणमा कपडामा हजारौँ केमिकल्सहरु रहेको र त्यो विषादीयुक्त रहेको बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन, यो केमिकल्सबाट एलर्जी सम्वन्धी तथा चर्म रोग सम्वन्धी विरामीको खतरा बढी हुन्छ ।
गुलियोले कसरी बिगार्छ दाँत ?: कसरी बचाउने दाँतको इनामेल ?